Izimakethe ze-gourmet ezi-4 ozozifuna ukuvakashela eSpain | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Spain amadolobha, Gastronomy
Izimakethe zokudla ezindala zasemadolobheni seziye zaba ngokuhamba kwesikhathi izikhala zokudla lapho ungathenga kusuka kumikhiqizo eyisisekelo yokudla okuyisibiliboco sangempela.
Ezihlokweni ezinkulu zezifundazwe, sekwande izimakethe eziningi ezikhulukazi eseziphenduke enye yezindawo zokuvakasha. ngisho nasemathempelini e-gastronomic ama-foodies. Njengamanje, akulula ukwazi ukuthi zingaki eSpain kepha zikhona ezimbalwa futhi ngayinye inentelezi yayo. Izici zayo eziyinhloko? Imvamisa bonke banokufana kokuklanywa okukhethekile, umhlobiso we-avant-garde nokukhanyisa, ukwakheka komlando kanye neziphakamiso ezithakazelisayo zokupheka.
Indawo engaphambili yeMakethe yaseLa Boquería eBarcelona
Eyaziwa ngokuthi iMercado de la Boquería, igama layo elisemthethweni yiMercat de San Josep futhi itholakala eRamblas edumile yaseBarcelona, ​​lapho kwakukhona khona iConvent yeSan José. Kodwa-ke, besivele sikhona njengemakethe evulekile e-Middle Ages, okuyenza ibe ngenye yezimakethe ezindala kakhulu emhlabeni.
Ingenye yezindawo eziyizifanekiselo kakhulu eBarcelona futhi ingenye yezindawo zayo zokuheha izivakashi. Lapha ungathola zonke izinhlobo zemikhiqizo esezingeni eliphezulu efana namasoseji, izinhlanzi zasolwandle, izithelo, ukudla okusemathinini noma inhlanzi enosawoti. Ibuye ibe nemigoqo nezindawo zokudlela eziningana ukunambitha okungcono kakhulu kokudla kwaseCatalan naseSpain.
ELa Boquería singathola amadokodo angama-250 lapho kuthengiswa khona imikhiqizo yokudla, kanye neminye imigoqo, izindlu zangasese, iGastronomic Hall nezinye izindawo ezihlobene nemakethe. Sincoma ukuthi uye ephoyinti lokucela imininingwane yemephu ezokwenza kube lula kuwe ukuthola amatafula athile eMakethe yaseLa Boquería njengoba zonke zibonakala ngokusobala.
Uma uhlela ukuvakashela iBarcelona kungekudala, Sikukwazisa ukuthi uye eLa Boquería futhi ujabulele umoya ogxile lapho ngenkathi uphuza kwesinye sezitebele zawo noma uyothenga.
Isithombe nge-Diario de Valladolid
Kusukela yavulwa ngo-2013, iValladolid Gourmet Station isithengiswe ngokuphelele. Itholakala eduze kwesiteshi sesitimela sedolobha futhi Inhloso yalo ukuba isikhala senkomba yokudlela lapho kunambitha imikhiqizo engcono kakhulu eneDemocratic Origin and other rich culinary.
Isiteshi seValladolid Gourmet sibonakala ngemikhiqizo yaso enhlobonhlobo nangokukhululeka komsebenzisi lapho ekhetha izitsha azithandayo esebenzisa uhlelo lokunambitha isheke olusha. Ngakolunye uhlangothi, ikilasi elisha futhi elenza imisebenzi eminingi i-Escuela Gourmet lihlose ukusondeza i-gastronomy eduze nomsebenzisi ngokusebenzisa imibukiso yokupheka bukhoma, ukunambitheka komkhiqizo noma ukusayinwa kwamabhuku okuhlobene ne-gastronomy.
Phakathi kwamatafula esingawathola kulo makethe omnkantshubomvu kubalwa i-croquetry, indawo yokudlela yokudla kwasolwandle, i-churreria, isitolo soshizi nendawo yokuphuza iwayini, yize lokhu kunikezwa kubanzi kakhulu. Ukujabulela ngokugcwele usuku lwama-tapas eValladolid Gourmet Station, sincoma ukuthi uthole isheke lokunambitha ngoba ngama-euro angama-13 kuphela ongajabulela ukudla okuphindwe kasikhombisa kunoma yisiphi isitolo se-gourmet.
Le makethe ye-gastronomic yeza ukuqedela ukunikezwa okungakholeki kukaValladolid maqondana nama-tapas nama-pinchos. Iguqulwe iminyaka yaba esinye sezihloko ezinkulu zama-tapas aseSpain, awukwazi ukuphuthelwa yilesi sidlo esisha sokudla kumzila wakho odlula eCastilla y León.
Kutholakala enhliziyweni yeMadrid yendabuko, eduze kweMeya ePlaza edumile, iMercado de San Miguel. Indawo eyisimangaliso nomlando umemezele iSiza Senzalo Yesiko ogama lakhe "ithempeli lemikhiqizo emisha lapho ophambili kunguhlobo, hhayi umpheki".
Yakhiwa ngo-1835 ngumakhi uJoaquín Henri ukuze ibe yimakethe yokudla futhi yaqedwa ngu-Alfonso Dubé y Díez ngo-1916. Eminyakeni emithathu kamuva yavulwa futhi yahlala isebenza isikhathi eside yaze yaqala ukwehla ngenxa yokuhluka izizathu. Ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, iqembu losomabhizinisi lanquma ukulilondoloza ekulahlweni futhi liguqulwe libe ngumqondo omusha: Izindawo zokubonisa ezisezingeni eliphakeme lapho kukhethwa khona imikhiqizo enganambitha esizeni. Umbono obambe phakathi kwabathengi yize amanani entengo akuzona zonke izabelomali.
Imakethe yaseSan Miguel inezitolo ezingaphezu kwamashumi amathathu zezinhlobo ezahlukahlukene kakhulu: ushizi, ama-oysters, inyama, okuphuma kwengulube yase-Iberia, izithelo, amawayini, ukhukhamba, inhlanzi, i-pasta entsha, amaqebelengwane ... impumelelo ibizwakala.
Enye indlela ethokozisayo (futhi emnandi) yokwazi iCórdoba ngezimakethe zayo. Enhlokodolobha ye-Caliphate yiVictoria Market, isikhala se-gourmet esihlanganisa ndawonye okuhle kakhulu kweCordoba nokudla kwamazwe omhlaba kwizitebele ezingamashumi amathathu ezinhle, okulungele ukufaka ibhulakufesi, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa.
Le makethe isukela ngonyaka we-1877 futhi ihlala eBooth endala ye-Circle of Friendship, isakhiwo sensimbi esenziwe ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye esakhiwa ePaseo de la Victoria njengedokodo elifanele lamalungu e-Circle of Friendship.
Lapha ungathola kusuka kuziphakamiso zamazwe omhlaba ezivela e-Italy, eJapane, eMexico noma e-Argentina kuya kokudla kwendabuko kwase-Andalusian okumelwe ngendlela yama-salmorejo, ama-croquette, ilayisi, inyama nenhlanzi. Konke lokhu kuhambisana nezinyosi ezingcono kakhulu newayini.
Emakethe yaseVictoria de Córoba kukhona nemenyu yokunambitha enconywe kakhulu equkethe ama-tapas ama-4 nesiphuzo sama-euro angu-11,50.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » 4 izimakethe ze-gourmet oyofuna ukuzivakashela eSpain